ဂျေဆန်မီလာ မကြာသေးမီကဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်မှာသူသည်နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်လွှင့်သောအခါသူမွေးဖွားသည်ဟုခံစားမိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သူသည်ဤသူငယ်အတွက်ဂုဏ်ယူမည်မှာသေချာသည်။ The LinkedIn မှခေတ်မီ Marketer ရဲ့လမ်းညွှန် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရှင်အမျိုးမျိုးတို့၏အကြံဥာဏ်များ၊ အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များနှင့်အရင်းအမြစ်များစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ၎င်းကိုသင် download မလုပ်သေးပါက၎င်းကို download လုပ်၍ သင်၏စီးပွားရေးကွန်ယက်ကို LinkedIn တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးရန်စာရင်းအဖြစ်အသုံးပြုပါ။
ဂျေဆန်မီလာ - Sr. Manager၊ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ LinkedIn စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖြေများ။ @JasonMillerCA LinkedIn တို့.
ဒါတော့ Wheatland Kelly Services မှ Marketing of VP၊ Author, Speaker ။ @ToddWheatland LinkedIn တို့.
Tags: အမ်း Handleybarry feldmanဘရိုင်ယန် Carter ကဘရိုင်ယန် Clark ကDave kerpenDavid Meerman Scottဟိုင်ဒီ cohenJason Keathဂျေဆန်မီလာဂျေးဗာဂျက်ဖ် Bullasဂျိုး Pulizzikoka sextonLee Odden ပါlinkedinMatt heinzMichael Brennerမိုက်ကယ် BritoNeal Schaffernichole ကယ်လီstephanie Sammonsစတီဗင် farnsworthဂျုံစပါးခင်းများထိပ်တန်းလူမှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူများviveka ဗွန်ရို